Akwụkwọ akụkọ kacha mma ugbu a
Nyocha nke akwụkwọ akụkọ ugbu a
Paradaịs nke atọ, nke Cristian Alarcón dere
Ndụ ọ bụghị nanị na-agafe dị ka okpokolo agba obere oge tupu veil nke-awụ akpata oyi n'ahụ ìhè ikpeazụ (ma ọ bụrụ na ihe dị otú ahụ n'ezie na-eme, karịrị ama ntule banyere oge nke ọnwụ). N'ezie, ihe nkiri anyị na-awakpo anyị n'oge a na-atụghị anya ya. Ọ nwere ike ime n'azụ wheel iji dọta anyị…
N'ime Ọdọ Mmiri Success, nke Gary Shteyngart
O nwere ike ịbụ na Ignatius Reilly bụ onye na-akwado Don Quixote. Dịkarịa ala, n'echiche ya nke onye ara ahụ rapaara n'ebe a na-alụ ọgụ megide ikuku ikuku mere ibu site n'echiche zuru oke. Na enweghị obi abụọ ọ bụla Barry Cohen, onye na-akwado akụkọ a nke Gary Shteyngart, nwere ọtụtụ…
Ìhè okpomọkụ, na mgbe abalị gasịrị, nke Jón Kalman Stefánsson
Oyi na-enwe ike ịjụ oyi n'oge dị ka Iceland, nke akpụziri site na ọdịdị ya dị ka àgwàetiti a kwụsịrị na North Atlantic, nke dị n'etiti Europe na America. Kedu ihe bụbu ihe mberede ala dị iche iche iji kọọ akụkọ nkịtị n'iche maka ndị ọzọ...
Onye na-akọ ubi, onye na-ese ihe na onye gbara ọsọ, nke César Aira dere
Onye ọ bụla na-ede akwụkwọ na-asọpụrụ onwe ya aghaghị ileba anya na ọrụ a na-akpaghasị anya, ọ bụghị nanị na ọrụ ya, kamakwa na akwụkwọ n'ozuzu ya. Na César Aira agaghị adị ntakịrị n'ihi na avant-garde bụ ọkọlọtọ. Ma ọ dịghị njọ ma ọlị ...
Akwụkwọ nke ịhụnanya niile, nke Agustín Fernández Mallo dere
Akwụkwọ nwere ohere ịzọpụta anyị. Ọ bụghịzi ajụjụ nke iche echiche banyere ọba akwụkwọ ebe ụmụ anyị nwere ike ịhụ echiche, sayensị na ihe ọmụma edebe n'akwụkwọ dị ka patent nke ihe-apụghị izere ezere involution. Anyị maara na ọ dịghị ihe ga-ahapụ ngwa ngwa ka emechaa. Ya mere na ...
Egwu na ọkụ, nke Daniel Saldaña dere
Mgbakọ nwere ike ịdị ilu dị ka ohere nke abụọ na ịhụnanya. Ndị enyi ochie na-agbalịsi ike nwetaghachi oghere nke na-adịkwaghị adị iji mee ihe na-abụghịzi nke ya. Ọ bụghị maka ihe ọ bụla akpan akpan, naanị n'ihi na n'ime ala ha adịghị eju afọ, ma na-achọ naanị ...
Akụkọ na-akpa ọchị, nke Luis Landero dere
Akụkọ akụkọ ịhụnanya ọ bụla nwere nnukwu isi, ma ọ dị ugbu a ma ọ bụ nke dịpụrụ adịpụ, nwere ike ọ gaghị adị iche n'akụkụ ịhụnanya ya. N'ihi na akwụkwọ akụkọ ịhụnanya nke transcendent, dịka m na-ekwu ihe ọ bụla metụtara ụdị pink, na-agwa anyị banyere mmetụta na-agaghị ekwe omume njedebe n'ihi ọnọdụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, n'ihi na ...
Anapụla gị okpueze gị, nke Yannick Haenel dere
Anyị na-enwe mmasị n'oge mara mma nke mmadụ na-ebili na ntụ ya wee tinye onwe ya n'ọgbapụ nke echiche ya na-ejubiga ókè. Nkwenye na nkwubi okwu ahụ na ihe ndụ pụtara nwere ihe ziri ezi nke akụkọ. Ọbụlagodi karịa mgbe akpa nke mmeri na-achịkọta otu dị ka ...
Tuzdee asaa, nke El Chojin
Akụkọ ọ bụla chọrọ akụkụ abụọ ma ọ bụrụ na ọ ga -achọta ụdị njikọta, nke bụ ihe ọ na -eme na usoro ọ bụla na -abanye n'ókèala mimicry mmetụta. Ọ bụghị ajụjụ nke ịkọwa ụdị akụkọ abụọ a n'ihu onye mbụ. N'ihi na ...
Obi Triana, nke Pajtim Statovci dere
Ihe gbasara agbataobi Triana a ma ama na ọbụghị egwu agaghị aga. Agbanyeghị na aha ahụ na -ezo aka na ihe yiri ya. N'ezie, ezigbo Pajtim Statovci nwere ike ọ gaghị echedị ihe ndaba a. Obi Triana na -arụtụ aka na ihe dị nnọọ iche, na akụkụ na -agbanwe agbanwe, na ịbụ onye, ​​...
Ngalaba anụ ọhịa wolf, nke Javier Marías dere
Ọ bụ oge kacha mma iji nwetaghachi mpụta mbụ nke otu onye edemede Spanish kacha mma ugbu a, Javier Marías. N'ihi na otu a ka esi achọpụta onye na -akọ akụkọ na -aga n'ihu na mahadum okike niile dị n'ihu. Ngụgharị ihe ùgwù nke na -agwa anyị gbasara olu onye na -akọwa ya. Na n'ihi na ...